Eo An-Tànan’i Rashid Khan, Ilay Kintan’ny Mpilalao Cricket Afgana, Ny “Hoavy” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2018 4:50 GMT
Faly fa voafidy ho isan'ny mpilalao cricket mendriky ny T20I XI tao anatin'ny 25 taona farany ary tafiditra ho isan'ny mpilalao cricket mahay indrindra maneran-tany. Misaotra anareo ry mpitsara sy ny @ESPNcricinfo 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/k2GDwfu4SJ
Rashid Khan eo am-pilalaovana. Sary nozaraina tao amin'ny kaonty ôfisialin'ny facebook-ny.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy dia niakatra be ny laharan'i Afganistàna amin'ny filaharana ankapobeny amin'ny cricket, sady namiratra indrindra tao amin'ny T20, karazan-dalao vao noforonina tamin'ny 2003, izay maharitra adin'ny telo, ka ny ekipa tsirairay dia miatrika baolina in-120.
Fa herinandro vitsy talohan'ny nandresen'i Afganistàna an'i Bangladesh voalohany tamin'ny T20. i Rashid Khan no “kintan'ny lalao”, hoy ny iray tamin'ireo gazety bangla malaza.
Tahaka izany koa, tamin'ny lalao nihaonany tamin'i Irlandy tamin'ny 2017, norombahany daholo ny anaram-boninahitra rehetra, tamin'ny nahazoany ny fara-tampony amin'ny mpanipy baolina nahazo ‘guichet’ dimy haingana indrindra tamin'ny T20 iraisam-pirenena.
Tamin'ny lalao fifaninanana tany Zimbaboe tamin'ny Oktobra 2015 no nanombohan'i Rashid Khan ny lalaony cricket iraisam-pirenena, fony izy vao feno 17 taona. Telo taona latsaka aty aoriana, lasa izy no kapiteny tanora indrindra mitarika ekipa iraisam-pirenena.
Tsy manana olana ara-bola intsony i Rashid Khan na dia niaina tamin'ny fahantrana aza. Tamin'ny 2017, tamin'ny faha 18 taonany, nanao sonia fifanarahana tamin'ny ekipan'ny Sunrisers Hyderabad izy mba hilalao amin'ny Ligy indiana voalohany (IPL), izay manankarena indrindra erantany.